Kutanga Uganda Airlines Airbus 330-800 inobata muEntebbe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Kutanga Uganda Airlines Airbus 330-800 inobata muEntebbe
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Uganda Airlines yakatora kuburitsa yekutanga ye2 nyowani Airbus A330-800 neo. Ndege yakatorwa naCapt. Michael Etyang yakarova kuEntebbbe International Airport muna Zvita 22, 2020, na10: 30 mangwanani kukwazisa mvura.
Muri iki gihugu, Umuyobozi Mukuru wa Uganda, U.Yoweri Kaguta Museveni yashyizeho umugambi w'ingabo zirwanira uruhara.
Pamberi pechiitiko ichi, akatumira tsamba yekukorokotedza achiti: “Makorokoto! Yakamutsidzirwa Uganda Airlines ichatsigira kukura kwedu kwehupfumi nekufambisa zvifambiso nekushanya. "Kuchava kukurudzira kukuru kana vanhu vekuUganda vanoshandisa mamirioni mazana mana emadhora gore negore mukufamba nendege vakasvika kunhandare yendege yedu pachedu."
Nhumwa dzakatungamirwa negurukota rezvemabasa, General Katumba Wamala, pamwe nevakuru veUganda Civil Aviation Authority, Uganda Airlines, pamwe neHurumende Yezvemari vakasiya Toulouse, France, kunogamuchira ndege iyi zviri pamutemo.
Achireverera rwendo rwacho, Wamala akatsanangura kuti timu yehunyanzvi yakanga yafamba kare kuti iferefete zvese uye nekutarisa bhuku rekushandisa pamwe nendege. Izvi ndizvo zvinoitwa nemashumiro nemadhipatimendi mukutarisa-usati waendesa kuti usimbise izvo zviri pabhuku ndiyo ndege chaiyo.
“Ndinonzwa kudada zvikuru. Kwete chete kuti tiri kuwana pfuma yerudzi urwu asi kuti vakomana vari kuseri kwecockpit maUganda. Pakamiswa kambani yendege, takaona kuti taive nevazhinji vekuUganda vane hunyanzvi hwakawanda hwakapararira kwese kwese avo vaipa rubatsiro kune vamwe vanhu. Wadii kupa masevhisi aya kuUganda? Saka, ndinofara kwazvo, ”akadaro.
Cornwell Mulewa, CEO weUganda Airlines aivewo muchikwata ichi, akati: “Iri izuva rakakosha munhoroondo yeUganda Airlines. "Tinofara nezve kuunzwa kweA330 neo itsva inosimbisa kugona kwedu muzvikepe uye nekuzivisa zvinodiwa nemabasa ekufamba kwenguva refu."
Chazvino chinyowani cheairbus choburitswa pawebhusaiti yavo chinotaura kuti chizvarwa ichi cheairbus inoonekwa seyakakodzera ndege kushanda sechikamu cheECVID-19 kupora.
Ndege nyowani inowedzera ku iwo mavhiri ekutanga e4 CRJ 900 yekutanga yakaunzwa muna Kubvumbi 2019. Yechipiri Airbus A330-800 neo inotarisirwa muna Ndira 2021.